दसैंमा नेपालीले कति खान्छन् मासु ? : ९ करोड १९ लाख किलो मासु खपत - Sunaulo Nepal
दसैंमा नेपालीले कति खान्छन् मासु ?...
आश्विन २५, २०७८ सोमवार १४:१० बजे
विभागकाअनुसार खसीबोकाको माग पुरा गर्न हेफर इन्टरनेशनलसँग आवद्ध रहेका सहकारीमार्फत उपत्यकामा ५१ हजार ३ सय २३ गोटा आपूर्ति गर्न सुरु भएको छ । यस्तै बाख्रा व्यवसायी महासंघ(हेफरसँग आवद्धसमेत गरी) उपत्यकामै ६० हजार गोटा आपूर्ति हुन सुरु भएको छ । त्यस्तै खसीबोकाको स्थानीय व्यवसायीमार्फत उपत्यका आसपासका क्षेत्रबाट ८ हजार गोटा प्रतिदिन आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विभागकाअनुसार नेपालमा बाख्राजात (बाख्रा, खसीबोका, पाठापाठी) कूल जनसंख्या १ करोड ४० लाख छ । यसबाट बैज्ञानिक हिसाबअनुसार ३६ प्रतिशतका दरले वार्षिक ५४ लाखको संख्यामा खसीबोका मात्रै उत्पादन हुन्छ । ५४ लाख खसीबोकामध्ये करिब २५ प्रतिशतका दरले १२ लाख गोटा औपचारिक रुपमा ठूलो सहरी बजारमा र बाँकी स्थानीय र नजिककै बजारमा खपत हुन्छ ।